Kenya oo diiday in Madax furasho laga bixiyo dhaqaatiirtii Cubanka ahaa – Gedo Times
class="post-template-default single single-post postid-55957 single-format-standard">
Home / Wararka Maanta / Kenya oo diiday in Madax furasho laga bixiyo dhaqaatiirtii Cubanka ahaa
Kenya oo diiday in Madax furasho laga bixiyo dhaqaatiirtii Cubanka ahaa
Dowladda Kenya ayaa diiday inay madax furasho ka bixiso sii daynta laba dhaqatar oo u dhashay dalka Cuba oo jimcihii ay Mandheera ka soo Afduubteen rag lala xiriirinayo in ay ka tirsan yihiin Al-shabaab.
Afhayeenka Booliiska Kenya Charles Owino ayaa sheegay in Dowladdu ay isku dayi doonto in ay si xirfadeysan ku soo badbaadiso dhaqaatiirta, iyada oo aan bixin lacag.
Waxaa kaloo sheegay afhayeenka inaysan dhiiri gelinan Madax-furasho lagu bixiyo arrin dambi ah, Sababtoo ah taasi waxaa ay dhiiri gelineysaa Afduubashadda, Waxaan adeegsan doonaa hanaan sharci ah inta aan waajibkeena gudan doono,” ayuu ka sheegay shir jaraa’id oo uu ku qabtay .
Sarkaal Booliiska Kenya ka tirsaana ayaa waxaa uu soo dhaweeyay odayaasha Soomaalida ah ee Kenya iyo Soomaalida deegaanka oo isku dayaya in ay Wada hadal la furaan Al-shabaab, si dhaqaatiirta loo sii daayo.
Waxaa uu sheegay wadahadallo kasta ee odayaashu galaan aysan hey’adaha Dowladda ka joojineynin dadaalkooda ay Afduubka dhaqaatiirta wax uga qabanayaan.
← Previous Story Maraykanka oo Sheegay Hawgal ay ka fuliyeen Puntland inay ku dileen Horjoogayal Shabaab ah
Next Story → Daawo:Kal fadhigii Labaad ee Jabhada Onlf ayaa ka furmay magaalada Qarbi Bayax